I-Nubia Z18S iya kuphehlelelwa nge-31 ka-Okthobha njenge-Nubia X | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Kuninzi esele kuthethiwe malunga neflegi elandelayo yeNubian, ekwakusithiwa izakubizwa I-Z18S, kodwa yintoni ngoku hit kwimarike njengoNubia X, ngokuka poster entsha esemthethweni etyhilwe kutshanje yinkxaso-mali yeZTE.
Ngaphambili, isixhobo sokusebenza okuphezulu savuzwa ngaphezulu kwesihlandlo esinye, ke ukucaciswa kwayo kuqikelelwanga kungakhange kumangalise nakanye, kunye noyilo lwayo, ekulindeleke ukuba lubenekrini ezimbini.
Kwakutsha nje ukuba umphathi we-Nubia u-Ni Fei wabelane nge-poster yokumiliselwa kwefowuni yeflegi ezayo Weibo. Umqondiso utsho Isiphelo siza kusungulwa nge-31 ka-Okthobha kwaye ikwaveza ukuba umhla ungunyaka wesithandathu womenzi. Ngenxa yale nto, kunokwenzeka ukuba umsitho mkhulu, kuba umhla uphindaphindwe kabini njengesikhumbuzo sayo, ke oko "kuya kuyiphosa indlu ngefestile."
Eyona ndawo iphambili yeNubia X kuyilo lwayo lwescreen. Ukuvuza kuvelise ukuba ifowuni ine-6.26-intshi ye-FullHD + LCD screen ngaphandle kwe-bezel kwelinye icala kunye ne-5.1-intshi ye-OLED HD + isikrini kwelinye icala. Ukongeza, bachaza ukuba inikwe amandla yiprosesa yeQualcomm's Snapdragon 845 kwaye iya kufumaneka nge-6 okanye i-8 GB ye-RAM kunye ne-64 okanye i-128 GB yendawo yokugcina yangaphakathi.
Enye idatha ibonisa ukuba ifowuni ineekhamera ezimbini kuphela, kwaye ezi zikwelinye icala: ngaphezulu kwescreen esincinci. Ikhamera ephambili sisisombululo se-24 MP kwaye isivamvo sesibini yi-16 MP, njengoko kunjalo nangeekhamera zangasemva ze I-Nubia Z18. Ukongeza, i-Nubia X iza nebhetri ye-3.800 mAh ngenkxaso yokutshaja ngokukhawuleza, iya kuqhuba i-Android 8.1 Oreo ngaphandle kwebhokisi, kwaye iya kufumaneka ngombala omnyama negolide.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-ZTE izakwazisa i-Nubia Z18S njenge-Nubia X nge-31 ka-Okthobha
Sala kakuhle, kuGoogle +: inethiwekhi esetyenzisiweyo encinci ayizukubonelela ngeenkonzo ezininzi